Degso Winamp loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (12.21 MB)
Iyada oo leh Winamp, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu doorbida badan uguna isticmaalka badan warbaahinta adduunka, waxaad ku ciyaari kartaa dhammaan noocyada faylasha maqalka iyo fiidiyaha ah dhibaato laaan.
Inta lagu jiro rakibidda Winamp, waxaad haysataa fursad aad ku habayn karto goobo badan oo la xiriira barnaamijka sida rabitaankaagu yahay. Waxaad habayn kartaa goobo badan inta lagu jiro rakibidda, laga bilaabo qaababka maqalka iyo fiidiyaha ee aad rabto inaad la ciyaarto Winamp si aad ugu darto badhanka ciyaarta oo leh Winamp badhanka midigta guji ee Windows.
Is -dhexgalka isticmaale ee barnaamijku waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee ay caan uga tahay adduunka oo dhan. Haysashada is -dhexgal aad u faaiido badan, Winamp wuxuu soo jiitaa dareenka badhamada kontaroolka ee si xeeladeysan loo dhigay, liistada ciyaarta oo leh faylasha aad rabto inaad ciyaarto, dejinta barbaraha iyo waxyaabo kaloo badan.
Iyada oo leh is -dhexgalka adeegsadaha casriga ah ee nooca Winamp 3.0 iyo wixii ka dambeeya, shirkadda, oo siisa dadka isticmaala taageerada midabyo badan oo kala duwan si ay ugu adeegsan karaan ciyaartoydooda warbaahintooda midabka ay rabaan, aad bay u yaqaaniin sida loo farxiyo dadka isticmaala. Waqtigan xaadirka ah, waxaa suurtagal ah in la helo mowduuc adiga kuu gaar ah oo ka tarjumaya qaabkaaga Winamp, oo ah cayaaryahan warbaahineed oo aad loo hagaajin karo.
Awood u leh inuu ciyaaro ku dhawaad ​​dhammaan faylasha warbaahinta ee la yaqaan iyada oo aan wax dhibaato ah la kulmin, Winamp waligeey iima quusan intii aan imtixaannada ku jiray illaa hadda. Marka laga reebo ku ciyaarista maqalka iyo fiidiyaha fiidiyahaaga adag, waxaad bilaabi kartaa dhageysiga idaacado badan oo tayo leh oo leh dhowr gujin oo leh Winamp, oo taageero siisa idaacado badan oo internetka ah.
Iyada oo la siinayo ikhtiyaarro badan oo maqal iyo tafatir fiidiyow ah isticmaaleyaasha, Winamp waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud u maamusho oo aad u abaabusho dhammaan keydkaaga warbaahin badan oo leh taageerayaasheeda barbaraha, in ka badan 100 walxood oo muuqaal ah iyo liisaska waxtarka leh.
Barnaamijka kuu oggolaanaya inaad ku diyaariso CD -yada muusikada ee kuu gaarka ah marka lagu daro muusikada iyo fiidyowyada, waxaad ku keydin kartaa CD -yada muusigga kombiyuutarka qaabab kala duwan sida AAC, MP3, WMA iyo WAV.
Wali waa ciyaaryahanka ugu badan ee warbaahineed ee suuqa, Winamp wuxuu noqon doonaa hogaamiyaha beertiisa muddo dheer, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan qaabab badan oo warbaahin ah oo ay taageerto, is-dhexgalkiisa si sahlan loo adeegsado oo si wanaagsan loo habeeyay, dejimaha horumarsan iyo ikhtiyaarrada is-habeynta.
Soo hel heesaha oo toos uga soo dejiso muusikada ciyaartoyga warbaahinta
La jaan qaada dhammaan noocyada Windows
Kordhinta waxaa mahad leh plugins kala duwan
Taageerada sync iPod oo la xoojiyay
Keenista maktabaddaada iTunes
Dejimaha barbaraha sare
Hadda ciyaarista heesta ama muuqaalka ciyaarista fiidiyaha
Taageerada fiidiyaha fiidiyaha
Arag macluumaadka heesta iyo farshaxanka durdurrada
Taageero luqado badan leh
Awoodda lagu xakameyn karo cayaarahaaga warbaahinta iyada oo loo marayo biraawsar leh aaladda Winamp
UI la xoojiyay iyo taageerada daboolida albumka
Kaalmo badan oo MP3 ah oo ku wareegsan
Helitaanka sumadda ID3 ee otomaatiga ah
Awoodda lagu ciyaaro dhammaan qaababka maqalka iyo fiidiyaha
Helitaanka kumanaan muusig oo bilaash ah iyo faylasha fiidiyaha
Dhageysiga idaacadaha AOL
Xusuusin: Winamp waxaa si rasmi ah loo joojin doonaa laga bilaabo Diseembar 20, 2013. Si kastaba ha ahaatee, waxaad sii wadi kartaa inaad kala soo baxdo nuqulkii ugu dambeeyay ee barnaamijka ee aan ku kaydinay kaydinta faylka goobteenna taariikhdan ka dib.
Cabirka Faylka: 12.21 MB